चर्चित गायक रामजी खाँण र गायिका मन्जु बिकको “मेरै माया राम्रो” (भिडीयो)
म्युजिक स्टार नेपालको युटुब च्यानल द्वारा “मेरै माया राम्रो”बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रिय गायक तथा मोडल रामजी खाँण र गायिका मन्जु बिकको आवाज रहेको यो गीतमा गायक रामजी खाँणको संगित रहेको छ । यस्तै प्रख्यात सर्जक शिब हमालको उत्कृष्ट सब्द रहेको गीतमा चर्चित संगित संयोजक आशिष अविरलको संगीच संयोजन रहेको छ ।
आशिष म्युजिकको ब्यानरमा बजार ब्यबस्थापन गरिएको यो गीत निर्देशक प्रकाश भट्टको निर्देशनमा तयार पारिएको हो । भिडियोमा मोडल रामजी खाँण र जुना सुन्दास रहेका छन् ।
* तनाव के हो? कसरी तनाव ब्यबस्थापन गर्ने? (जानी राखौ)
मानसिक तनावका कारण मानिसलाई थुप्रै रोगहरू लाग्न सक्छ। डिप्रेसन, निराशापन, एन्जाइटिक डिसअर्डर, छटपटीको समस्या, त्यस्तै गरेर अनिन्द्राको समस्या हुन्छ। तनावमा मानिसहरूलेले रक्सी, गाजा, बिभिन्न खालका ट्याब्लेटसमेत प्रयोग गर्छन्।
धेरै तनाव भयो भने कहिलेकाही रक्सी खानेले पनि धेरै खान्छ। जस्तै भूकम्पका कारणले आफ्नो घर भत्कियो। अब बनाउने उपाए छैन त्यसले गर्दा कतिपए मानिसलाई तनाव भइरहेको छ। त्यस्तै पागलपनको समस्या पनि तनावकै कारण हुन्छ। टाउको दुख्ने समस्या अर्को समस्या हो। अलिकति तनाव भयो टाउको दुखिहाल्ने समस्या पनि हुन्छ कतिपएलाई।
ग्याष्ट्रिकको दबाइ खाएको छ, तर पेटको समस्या समाधान भएको छैन। दिसा कहिले ढिलो हुने कहिले चाडो हुने भएको छ। हातखुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, कहिले यता दुखे जस्तो कहिले उता दुखेजस्तो लाग्ने हुन्छ।
यस्तो बेलामा जचाउन गयो रिपोर्टमा केही पनि आउदैन। यो सबै तनावका कारणले हुन्छ। शंका लाग्ने, मलाई केही भयोकि भन्ने खालका महसुस हुने हुन्छ । रक्सी चुरोट गाँजा लगायतका कुलतमा फस्ने पनि हुन्छ।
मानसिक तनावबाट बच्न दुई वटा उपाय छन्। एउटा यसबाट कसरी जोगिने र अर्को यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने हो। सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । जसरी शरीर स्वस्थ्य राख्न हामी व्यायाम गर्छो त्यसैगरी मनको स्वस्थताका लागि पनि काम गर्नुपर्‍यो।
आफ्नो विचारलाई कसरी स्वस्थ्य राख्ने? विचार कतातिर गइरहेको छ। म आज कस्तो छु? मेरो सोचाई कस्तो छ? म स्वस्थ्य छुकि छैन? आज म खुसी छुकि छैन? अलि बढी तनावमा पो छुकि यस्ता कुरा बेलाबेलमा जाच्नुपर्छ।
पारिवारिक तनाव होकि, व्यवसायिक तनाव होकी, जागीरको तनाव होकी यसलाई पत्ता लगाउनुपर्छ। कसैले मलाई आलोचना गर्‍यो मैले माफी नदिएको होकी जस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो बाहेक निन्द्राको व्यवस्थापन, खानाको व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ। बेलाबेलामा मनोरन्जन आवश्यक छ।
यो रोग होइन यो त मान्छे कमजोर भएर हो। डिप्रेशन कसरी रोग हुन सक्छ यो आफैं ठीक हुन्छ भनेर परिवारले भन्दै जाँदा बिरामीले आत्महत्या सम्म गर्न सक्छ। यसलाई सुरूमा नै ध्यान दिनपर्छ। कहिलेसम्म यसलाई लुकाएर राख्ने? समस्या परिसकेपछि मात्रै सचेतता अपनाउने हाम्रो परम्परालाई बदल्नुपर्छ।
यो सँगै बिरामीले पनि मैले डाक्टरको सहयोग लिनुपर्छ लिए भने मात्रै मेरो समस्या ठीक हुन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ। म समाजको कुरा सुन्दिनँ, म अरूको कुरा सुन्दीनँ मलाई समस्या छ। म डाक्टरसँग सल्लाह लिन जान्छु भनेर बिरामीले पनि हिम्मत गर्नुपर्छ।
यो रोगीको संख्या यतिनै छ भनेर भन्न त सकिदैन। तर, विश्वमा बीसदेखि पच्चीस प्रतिशतलाई कुनै न कुनै खालको मानसिक समस्या रहेको हुनसक्ने बिभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ।
तर, नेपालमा यति नै छ भनेर कुनै पनि खालको डाटा अहिलेसम्म निस्किएको छैन र यसको अनुशन्धान पनि भएको छैन। तर, यी सबै समस्याका बिरामी बिशेषज्ञसँग सल्लाह लिन आइपुगेका हुदैनन्। नेपालमा जस्तै विश्वभर नै यसलाई लुकाउने चलन छ। जुन गलत हो।